Qomo Mudzidzi Response System uye Kirasi Clicker Yebvunzo uye Mabvunzo
QOMO inotungamira mhando yeUS uye yepasi rose inogadzira tekinoroji yekudzidzisa uye yemakambani.Kubva kudoc cams kusvika kuinteractive touch screens, tisu chete tisu tisu tisu chete anouya neakabatanidzwa zvizere (uye anochinjika) chigadzirwa mutsara chiri nyore kushandisa uye nyore pabhajeti.Mushure mekuita izvi kwemakore anoda kusvika makumi maviri, tinonzwisisa mashandire nemunhu wese kubva kumaCEO nemaCTO kusvika kumadistrict administrator nevadzidzisi vekirasi.QOMO inounza zviri nyore, zvinonzwisisika mhinduro dzinobatsira munhu wese kunakidzwa nezvaanoita zvakanyanya.
Qomo vakazvipira kuvandudza hunhu hwekudzidzisa uye kushanda zvakanaka pasi rese.Tichakupa iyo yakapfava, inonzwisisika mhinduro inokubatsira iwe kunakidzwa nezvaunoita.
Uye batanidza zvese zviwanikwa zvedzidzo zvinonakidza neQomo smart electronic equipment.
Sei Kusarudza Qomo?
Chikwata chedu cheR&D chinoumbwa nenyanzvi dzine anopfuura makumi emakore ruzivo pahardware uye software.Mwaka wega wega tichatora mhinduro dzevatengi uye zvinodiwa pamusika kuti tisimudzire zvigadzirwa zvedu kuti zvienderane nezvinodiwa nemusika.Isu tinovavarira kugadzira zvigadzirwa zvakangwara zvine mutengo wakanyanya wehupfumi uye mhando yepamusoro!
Gamuchira OEM/ODM Nebhajeti Yako
Semugadziri, tinogamuchira OEM neODM iyo inosangana neyako chinangwa uye musika.Iwe unogona zvechokwadi kushandisa yedu yakangwara yemagetsi emidziyo hardware kubatanidza neyako software.Uye Qomo ichapa yakanakisa mhinduro yekirasi yakangwara.Ita kuti zvive nyore kuti vadzidzi vatore chikamu mukirasi pasina kunyara.
Zvigadzirwa zvakangwara zveQomo zvinokubatsira kudzidzisa, kutaurirana uye kubatana zviri nyore uye zvinobudirira kupfuura zvawaimbofunga.Paunosarudza kusarudza Qomo semupi wako, isu tinokupa iwe yakazara sevhisi yekushandisa gwara uye rutsigiro.
Uye gore rega rega, isu tichapinda ISE / Infocomn.Iwe unokwanisa kutarisa zvigadzirwa zvedu zviri nyore kunyangwe iwe hauna kushanyira fekitori yedu.